विद्युतीय दुर्घटनाको जोखिम- विविधा - कान्तिपुर समाचार
असार २६, २०७५ कला तिमल्सिना
काठमाडौँ — सुन्दा सामान्यजस्तै लाग्ने विद्युतीय सुरक्षाका कुरा असामान्य रूपमा दैनिकजसो दुर्घटना र धनजनको क्षति गराउने माध्यमको रूपमा अखबार र फेसबुकमा आउने गरेको छ । करेन्ट लागेका समाचार र तस्बिरले सबैको मनलाई दुखित पार्छ । यस्ता घटनाबारे उल्लेखनीय छलफल, बहस र निष्कर्ष भएको पाइँदैन ।
वीरगन्ज लक्षवनका २ जना सासु–बुहारी कान्तिदेवी र जागोदेवी सोनार चापाकलबाट पानी तान्ने क्रममा, सल्यानमा खेतमा काम गरिरहेकी मेगली ओली र एकहल गोरु, घरमा बिजुलीको बल्ब फेर्ने क्रममा दाङका दिलबहादुर चौधरी, बागलुङमा जंगलबाट स्याउला लिएर घर फर्कने क्रममा बिजुलीको पोल छुँदा गुमा कँडेल र निशा कँडेल, धादिङमा घरधन्दा गर्ने क्रममा होमकुमारी पौडेल, पानी तान्ने क्रममा अर्जुन श्रेष्ठ, पोखरामा बिजुलीको तार सडकमा लत्रिएर मोटरसाइकलमा गुडिरहेका विष्णु बास्ताकोटी, सप्तरी मामाघर आएकी नसिमा खातुन प्रतिनिधि पात्रमात्रै हुन् ।
यस्ता धेरै नागरिकले करेन्टबाट दिनदिनै ज्यान गुमाइरहेका छन् । एकले अर्कोलाई बचाउने क्रममा करेन्ट लागेर दुबैको मृत्यु भएका घटना पनि छन् । २०७५ वैशाखदेखि यतामात्र पत्रपत्रिका र सामाजिक सञ्जालमा आएका खबरको आधारमा सरदर दैनिक १ जना मानिसले करेन्टबाट ज्यान गुमाइरहेको अवस्था छ ।
केही दिन अघिमात्र बिजुलीको पोल फेर्ने क्रममा डोटीका ४ युवा, बागलुङका २ किशोरी विद्युतीय दुर्घटनाका सिकार भएका छन् । करेन्ट लागेर घाइते र अंगभंग भएका, हातखुट्टा गुमाउनेहरूको संख्या पनि निकै छ ।
दिनहुँजसो भइरहेका यस्ता घटना न्यूनीकरण गर्नसक्ने कुनै उपाय नै नभएको हो त ? सम्बन्धित निकायले यस्ता घटनाको न्यूनीकरणका लागि के कस्ता पहल र कार्यक्रम ल्याएका छन् ? घटना भएपछि त्यसको क्षतिपूर्ति दिने पाटो अलग होला । पीडितले न्याय पाउला/नपाउला, त्यसका नीति–नियम बिमा, औषधोपचार, परिवारको पालनपोषण अर्को पाटो र बहसको विषय त छँदैछ, तर पनि यस्ता दुर्घटनाबाट बच्ने कुनै उपाय नभएकै हो त ?
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको लापरबाहीका कारण अधिकांश दुर्घटना भइरहेका छन् । जीर्ण विद्युत वितरण प्रणाली, कमजोर सूचना संयन्त्र, खतरायुक्त क्षेत्रलाई संकेत बोर्डहरू नराख्ने, तारपोलहरू निश्चित उचाइमा नटाङ्ने, टान्सफर्मर भएको क्षेत्रमा तारबार गरी मानव तथा पशुहरूलाई निषेध नगर्ने, भाँचिएका पोलहरू समयमा नफेर्ने, रुखका हाँगाबिँगाहरू समयमा नकाट्ने जस्ता गैरजिम्मेवार कार्यशैली छ । नागरिकको घरदैलोमा बिजुली जडान गर्दैमा विद्युत प्राधिकरणको दायित्व पूरा हुँदैन ।
यसको प्रयोगमा अपनाउनुपर्ने सावधानी, यसले पुर्‍याउन सक्ने क्षति, विद्युतीय सामग्रीको गुणस्तर, मापदण्ड, आयु, विद्युतको काम गर्दा प्रयोग गर्नुपर्ने सुरक्षा सामग्री, विद्युतको लाइन मर्मत र विस्तारका लागि अपनाउनुपर्ने सुरक्षा, घरभित्रको वायरिङका मापदण्ड, प्लगहरूको उचाइ जस्ता विषयमा पनि शिक्षा दिनु अनिवार्य छ । आम नागरिकलाई पनि विद्युतीय सुरक्षा सम्बन्धी जनचेतना र ज्ञानको कमी देखिन्छ ।
बिजुलीको खम्बामा गाईवस्तु बाँध्ने, बिजुलीका तार र पोलहरूमा कपडा सुकाउने, बिग्रिएका प्लगहरू, खुइलिएका तारलाई नफेर्ने, टेप नगर्ने, चिसो हातले विद्युतीय सामग्री चलाउने, बच्चा केटाकेटीलाई विद्युतीय सरसामानहरूमा खेल्न र चलाउन दिने गर्छन् । त्यसकारण पनि दैनिकजसो यस्ता मानवीय क्षति बेहोर्दै आउनुपरेको छ ।
हुन त कतिपय अवस्थामा नागरिककै लापरबाहीले पनि दुर्घटना नभएका होइनन् । यस्ता लापरबाही पनि सुरक्षाको बारेमा पर्याप्त ज्ञानको अभावले नै हुने गरेको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले वर्षमा १ दिन विद्युतीय सुरक्षा दिवस भनेर मनाउँदै आइरहेको छ । तर त्यो दिवस प्राधिकरणको घेराभित्र मात्र सीमित छ । दूरदराज, कुनाकन्दराका नागरिकलाई विद्युतीय सुरक्षा दिवसको कुनै पत्तो छैन ।
बिजुलीबारे बताउन उनका घरछिमेकमा आजसम्म कोही पुगेका छैनन् । गाउँघरमा बिजुली त पुग्यो, तर बिजुली सम्बन्धी ज्ञान पुग्न सकेन । घरायसी कामकाजमा सबैभन्दा धेरै बिजुली प्रयोग गर्ने महिलाहरू हुन् । अधिकांश समय महिलाहरूको हात चिसो हुने गर्छ । भान्छामा काम गर्नुपर्ने भएकाले धेरैजसो समय खाली खुट्टा हुने गर्छ । खाना पकाउने, पानी तान्ने, आइरन गर्ने काममा महिलाहरूले अधिकांश समय बिताउने भएकाले यस्तो अवस्थामा करेन्ट लाग्ने सम्भावना बढी हुन्छ ।
विद्युत सम्बन्धी ज्ञानको कमीले सुरक्षित किसिमले बिजुलीबाट लिन सकिने अवसर र फाइदाबारे पनि महिला समुदाय अझ धेरै पछि छन् । त्यसकारण विद्युतीय सुरक्षा, जोखिम न्यूनीकरण, क्षतिपूर्ति र विद्युतको उत्पादनमूलक उपयोगको विषय अब राज्यको प्राथमिकतामा पर्नु आवश्यक छ ।
सानादेखि ठूला प्रविधि विद्युतमा आधारित छन् । यसबाट नै मुलुकको समृद्धि हुन्छ । त्यसकारण अब बिजुलीमा काम गर्ने प्राविधिकले मात्र विद्युतको विषयमा जानेर पुग्दैन । हरेक नागरिकले यसका गुण र अवगुणबारे जानकारी हासिल गर्नुपर्छ ।
राज्यको पुन:संरचनासंँगै स्थानीय सरकारहरूले नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने आवसर प्राप्त भएको छ । ऊर्जामा नागरिकको सहज पहुँच र अधिकार स्थापना गर्दै यसबाट जीवनमा प्राप्त गर्नसक्ने आर्थिक तथा सामाजिक लाभलाई पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले समेट्न सक्नुपर्छ । समाजको आधा हिस्सा ओगटेको महिला समुदाय सफा र सुरक्षित ऊर्जाबाट आजसम्म पनि निकै टाढा छ । त्यसैले विद्युतको प्रयोग सम्बन्धी पर्याप्त ज्ञान हासिल गर्दै अधिकतम उपयोगमा लगाउनसके राष्ट्रको समृद्धिमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सकिन्छ।
प्रकाशित : असार २६, २०७५ ०७:५२
विश्वकपमा झुम्दै नेपालीहरू
असार २६, २०७५ राजु घिसिङ
मस्को — नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिम विश्वकपमा पुगेको छैन । सिधै भन्ने हो भने नेपालको विश्वकपमा छनोट हुने त के तत्कालका लागि एसियन कप खेल्ने हैसियत पनि छैन । तैपनि रातो र चन्द्रसूर्य अंकित नेपाली राष्ट्रिय झण्डा रुसका विभिन्न रंगाशालामा फहराइरहेको छ, जहाँ विश्व फुटबलका चर्चित टिमहरू प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् ।
‘आफ्नो देशका लागि धेरै खेलियो । विश्वकप टेलिभिजनमा हेरियो । यसपालि प्रत्यक्ष अनुभव गर्ने अवसर जुरेको छ,’ मस्कोमा सोमबार भेटिएकी राष्ट्रिय महिला टोलीकी पूर्वकप्तान जमुना गुरुङले भनिन् । उनीसहित चारजना सेन्ट पिटर्सबर्गमा मंगलबार हुने फ्रान्स र बेल्जियमबीचको सेमिफाइनल हेर्ने तयारीमा रुस आइपुगेका हुन् । प्रत्येकले खेलको टिकट ७ सय ५० अमेरिकी डलरमा किनेका थिए ।
गोविन्द्रप्रसाद गौतम सन् १९८६ मा हाइड्रोमा इन्जिनियरिङ अध्ययन गर्न रुस आएका थिए । अध्ययनपछि मस्कोमै व्यवसाय गरिरहेका उनी विश्वकपअघि कहिल्यै रंगशाला प्रवेश गरेका थिएनन् । समूह चरणमा बेल्जियमले टयुनिसियालाई ५–२ ले पराजित गरेको खेल हेरेका उनले भने, ‘नजिकै भएर पनि कहिल्यै रंगशाला छिरेको थिइनँ । विगतका विश्वकप र युरो टीभीमै हेरेको थिएँ । यसपालि रंगशालाभित्रको वातावरण बिल्कुलै फरक लाग्यो । जिन्दगीकै अविस्मरणीय क्षण बन्यो ।’ गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को युरोप उपनिर्देशक समेत रहेका उनले स्पार्टाक मस्कोमा सात नेपालीसँगै खेल हेरेका थिए । ‘रंगशालामा छँदा विश्वकपमा नेपालको पनि खेल हेर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने लाग्दोरहेछ,’ उनले सुनाए ।
टयुनिसियालाई स्पार्टाकमा सजिलै हराएको त्यही बेल्जियम क्वाटरफाइनलमा ब्राजिललाई पनि हराएर सेमिफाइनल पुगेको छ । स्पार्टाकमा बेल्जियमको खेल हेरेका गणेश रामदामले भने, ‘समूह चरणको खेल हेर्दा नै बेल्जियमले एकदमै राम्रो गर्ला जस्तो लागेको थियो, त्यस्तै भयो । अहिले बेल्जियम उपाधिकै दाबेदारमा अघि बढेको छ । यस्तो टिमको खेल हेर्न पाउनु भाग्यमानी ठान्नुपर्छ ।’ २६ वर्षयता रुसमै रहेका उनले थपे, ‘अहिले अरु खेलको पनि टिकट लिएको भए झनै रमाइलो हुन्थ्यो भन्ने लागिरहेछ ।’
मस्कोमा बसिरहेका रामदाम र गौतमसहित झण्डै ४० नेपालीले अनलाइनबाट तीन महिनाअघि टिकट किनेका थिए । यहाँका थुप्रै नेपालीले चिठ्ठामार्फत पनि टिकट लिने प्रयास गरेका थिए । एनआरएनए रुसका अध्यक्ष रामेश्वर गौतमका अनुसार रुसमा करिब १ हजार नेपाली छन् । तर भौगोलिक रूपमा ठूलो देश भएकाले भेटघाट पातलो छ ।
‘पहिलोपल्ट रंगशालाभित्रै प्रत्यक्ष खेल हेर्ने अवसर गुमाएनौं,’ अध्यक्ष गौतमले भने, ‘त्यो पनि विश्वकपको प्रतिस्पर्धा । उत्साह नै अर्कै खाले हुनेरहेछ । फरक अनुभूति, निकै रोचक । विश्व फुटबलका ठूला स्टारहरूको खेल प्रत्यक्ष हेर्न पाउनु सुनौलौ अवसर हो ।’ उनले विश्वकपका खेल हेर्न र एनआरएनको अध्यक्षका रूपमा खेल हेर्न आएका नेपालीको आतिथ्यताकै लागि स्वदेश फर्किने योजना पछाडि सारेका थिए । एनआरएनए रुसका कोषाध्यक्ष गोविन्द आचार्यका अनुसार अस्ट्रेलिया, इंग्ल्यान्ड र अमेरिकामा रहेका नेपाली पनि विश्वकपको खेल हेर्न रुस आइपुगेका थिए ।
१४ खर्ब डलरको लगानीमा ११ सहरका १२ रंगशालामा आयोजित २१ औं विश्वकपमा करिब ५ सय नेपालीले प्रत्यक्ष हेर्ने अवसर पाए । सम्भवत: विश्वकपमा दर्शककै रुपमा भए पनि सबैभन्दा ठूलो नेपाली उपस्थिति यसैपालि हुनसक्छ । अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) का अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध प्रमुख नवीन पाण्डेका अनुसार १ सय ४३ नेपालीले एन्फामार्फत् विश्वकपको टिकट खरिद गरे । २ सय ६५ देखि ११ सय डलरसम्मको टिकट नेपालीले किनेका छन् । पाण्डेका अनुसार प्रतिटिकट ११ सय डलर तिरेर १५ जुलाईमा हुने फाइनल हेर्न २० नेपाली मस्को आउँदै छन् ।
विश्वकपको टिकट लिएपछि फिफाको वेबसाइटमा फ्यान आईडी बनाउनुपर्छ । फ्यान आईडी हात पार्नेले भिसा पनि लिनुपर्दैन र यसको सहारामा तोकिएको रेलवेमा नि:शुल्क यात्रा गर्न पाइन्छ । यसको फाइदा लिएर रुसका धेरै सहर घुम्ने नेपाली पनि छन् । यो विश्वकपका ६४ खेल ३० लाख बढीले हेर्न अनुमान गरिएको छ । त्यसमध्ये धेरै दर्शक रुसबाहिरकै हुन् ।
विश्वकप आयोजक सहरमा होस्टेल, होटेल र अपार्टको महँगी पनि चर्को बढेको छ । ठूला टिमहरू चाँडै बाहिरिएपछि बसाइ अलि सस्तो हुन थालेको अध्यक्ष गौतमले बताए । एपमार्फत् प्रयोग गरिने ट्याक्सी र खानाको मूल्य पनि उस्तै छ । केही नेपाली टुर प्याकेज लिएर पनि आएका छन् ।
एन्फाका उपाध्यक्ष पंकजविक्रम नेम्वाङको ३८ जनाको समूह प्रतिव्यक्ति साढे तीन लाखको प्याकेज खरिद गरेर रुस आएका थिए । अन्तिम १६ मा रुसविरुद्ध स्पेन र इंग्ल्यान्डविरुद्ध कोलम्बियाको खेल हेरेका उनले भने, ‘पहिलोपल्ट खुला रूपमा एन्फाले विश्वकपको टिकट बिक्री गरेको हो । त्यसैले धेरै जिल्ला, क्लब र प्रायोजक कम्पनीका साथीहरूले विश्वकपको खेल हेर्ने अवसर पाए ।’
रंगशाला प्रवेश नगर्नेका लागि फिफाले हरेक आयोजक सहरमा ठूला स्क्रिनसहितको फिफा फ्यान फेस्ट चलाइरहेको छ, जहाँ विश्वकपका खेल देखाइन्छ । परिवारसँगै सारांशमा क्रिस्टियानो रोनाल्डोको टिम पोर्चुगल–इरानको खेल हेरेका एनआरएनका केन्द्रीय महासचिव डा. बद्री केसीले भने, ‘पहिला विश्वकपको छनोट खेल पनि रंगशालामै हेरेको थिएँ । अहिले विश्वकप । टिकट नपाएको खेल साथीहरूसँग फ्यान फेस्ट वा कतै ठूला स्क्रिनमा हेरिरहेको छु ।’
प्रकाशित : असार २६, २०७५ ०७:५०